Ogige Ahịa Krakow | Akụkọ Njem
Ogige Ahịa Krakow
Maria | | Getaways Europe, Poland
Ogige Ahịa Krakow bụ square nke ochie kachasị na Europe na 40.000 m2 ya na isi ihe kachasị amasị ndị njem na obodo ahụ.
Ọ na-adọrọ uche ọ bụghị naanị maka ogo ya na ọnụnọ nke ụlọ akụkọ ihe mere eme dị mkpa kamakwa maka etu o si dị ndụ na njem nleta, ebe ndị njem nleta na ndị obodo na-ezukọ ebe ahụ iji nwee ọ toụ ma ọ bụ kọfị na mpaghara ụfọdụ.
Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị njem na-ewere Krakow Main Market Square dị ka ndị kachasị mma n’ụwa. Ọzọ, anyị gara ebe a ịmata ihe bụ ihe mere o ji kwesị nsọpụrụ dị otu a.
1 Akụkọ banyere Plaza
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na Market Market?
2.1 Halllọ Nzukọ
2.2 Basilica nke Santa Maria
2.3 Lọ Elu nke Townlọ Nzukọ Obodo ochie
2.4 Chọọchị San Adalberto
2.5 Ihe ncheta nke Adam Mickiewicz
Akụkọ banyere Plaza
Ọ bụ n’afọ 1254 ka a malitere wuru Oghere Krakow iji nweta nnukwu ahịa, isi obodo maka ọrụ mmekọrịta mmadụ na azụmahịa ya. N'oge na-adịghị anya, ezinụlọ ndị kacha baa ọgaranya na Krakow gbara ya gburugburu malitere ụlọ ha, ekele nke taa anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ ndị mara mma.
Publiclọ ọha ndị ọzọ dị oke mkpa nke chọọ Krakow square bụ Cloth Hall, Town Hall Tower, Basilica nke Santa Maria na Church of San Adalbert.
Ogige ae depụtara na UNESCO World Heritage bụ ebe ọtụtụ ọnọdụ obi ụtọ na ọdachi na Poland. Oge agbanweela mana taa ọ ka bụ otu akụkụ akuku kachasị hụ n'anya na Krakow.
Na gburugburu ya ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ụlọ oriri na ọ andụ bestụ kachasị mma na ebe ntụrụndụ na obodo.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Market Market?
Ogige Ahịa nwere ihe dị mkpa akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ogige a bụ ebe ndị isi bi na Krakow gbara gburugburu, site n'obí eze ochie na ụlọ bourgeois.
Ọ bụ akara nke Market Market na saịtị kachasị ese foto. Ọ bụ a Renaissance n'obí na mbụ dọtara ahịa na-azụ ahịa.
A malitere iwu ya na 1257, n'otu oge ahụ ka ogige ahụ na-anabata ya malitere ma maka ọtụtụ mmadụ, a na-ahụta ya ka ọ bụrụ ebe azụmahịa mbụ na akụkọ ntolite.
Na 1555, ọ tara nnukwu ọkụ nke bibiri lolọ Nzukọ ahụ, mana onye ama ama ama ama nọ na Giovani il Mosca de Padua wughachiri ya na usoro Renaissance.
Taa, a na-eji ngwa ya maka ebumnuche ọdịnala. Ala nke mbụ bụ ngalaba nke National Museum na Krakow na n'okpuru ala bụ Museum n'okpuru Krakow Rynek.
N'ime ya ị nwere ike ịhụ ebe obibi tupu arụ ụlọ nke square na ọtụtụ ihe sitere na ahịa ochie. N'akụkụ aka nke ọzọ, n'ime lolọ Nzukọ ahụ, ị ​​nwekwara ike ịga na Gallery nke Polish Art site na narị afọ nke XNUMX.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ịsị na Clọ Ahịa Akwa na-enweta aha a n'ihi na na mbido nke square, ndị ahịa guzobere ụlọ maka ire ákwà ma si n'ebe ahụ bilie "ahịa akwa".
Basilica nke Santa Maria
St. Mary’s Basilica bụ otu n’ime ihe ncheta kachasị mkpa na Krakow. Gothic n'ụdị, e wuru ya na njedebe nke narị afọ XNUMXth ma nwee nnukwu ihu faced nke ụlọ elu dị elu dị elu.
N’ụlọ elu kachasị elu e nwere okpueze ọlaedo nke na-echeta na mmalite nke basilica, onye na-afụ opi dọrọ ndị bi n’elu aka ná ntị banyere ihe egwu ọ bụla dị ka ọkụ ma ọ bụ mwakpo.
Ka ọ dị ugbu a, ọdịnala a na-aga n'ihu n'ike kemgbe awa ọ bụla onye opi na-egwu Hejna? mariacki, abụ olu ụtọ ọdịnala nke na-enye aha ya n'ụlọ elu kachasị elu.
Lọ Elu nke Townlọ Nzukọ Obodo ochie
Towerlọ elu a dị mita 70 bụ naanị ihe fọdụrụ na ochie Krakow City Hall, nke akwatu na 1820. E wuru ụlọ elu ahụ na njedebe nke narị afọ nke XNUMX ma taa ọ na-arụ ọrụ dị ka ikpo okwu na-ekiri ya na akụkụ nke klọ Ọrụ Ihe Ochie nke Krakow.
Chọọchị San Adalberto
Amabeghị ya nke ọma dịka Basilica nke Santa María mana ọ kara nka. Owuwu ya bidoro na mbido oge. Ọ na-ewu ewu nke ọma na ndị ahịa gbabara n'ahịa Square Krakow iji zụọ ahịa.
Foto | Magiczny Kraków
Ihe ncheta nke Adam Mickiewicz
Ọ bụ ihe ncheta maka nsọpụrụ onye ọdee ịhụnanya nke Polish nke ewepụtara na June 1898 iji mee otu narị afọ ọmụmụ ya. N'oge ọchịchị Nazi, ebibiri ya mana emesia gọọmentị Poland wughachiri ya ọzọ, ebe ọ bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta kachasị elu maka Krakow.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ogige Ahịa Krakow